सांसदलाई घडेरी ! | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / सांसदलाई घडेरी !
सांसदलाई घडेरी !
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय February 12, 2018	0 130 Views
हे टांै डा उपमहानगरपालिकाले प्रदे श नं. ३ का प्रदे शसभा सदस् यहरुलाई घर निर्माण गर्नका लागि प्रदेश मुकाम हे टौ ंडामा दश धुर घडे री दिने निर्णय गरे को खबरले धे रै लाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । नगर विकास समितिको स् वामित्वमा रहे को घडे री सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउन नगर विकास समितिका अध्यक्षदे खि त्यहाँ क्रियाशील सबै पार्टीका ने ताहरुसमे त सहमत हुनु झनै उदे कलाग्दो विषय हो  । यसरी सांसदहरुलाई दिइने घडे री सरकारी दररे टमा कौ डीको मूल्यमा उपलब्ध गराइने छ, त्यो पनि किस् ताबन्दीमा ∕ यसबाट स् थानीय सरकारको मानसिकता, काम गनेर् शै ली कस् तो रहे छ भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो पदैर् न ।
हुन त ने पाली समाजमा यसखालका कामलाई सामान्य ठान्ने अझ जायज नै मान्ने मानसिकता समे त छ । गलत नियत र उद्दे श्य राखे र गरिएका कामहरु कहिल्यै पनि जायज हुन सक्दै नन् । सांसदहरुलाई घडे री दिन खो ज्ने हो भने भो लि थप अरु क्यै दिएर किन्नुपनेर् अवस् था नआउला भन्न सकिन्न । यसको पछाडि जस् तो उद्दे श्य राखिए पनि त्यो गलत हुन्छ । घडे री खरीद बिक्रीको नाटक रचे र सांसदकै खरीद बिक्री गनेर् यो जना जननिर्वाचित स् थानीय सरकारले बनाउनु खे दजनक कुरा हो  । यस् तो हो भने अब समृद्धि दे श र जनताको हो इन, ने ताहरुकै हुने भयो  ।
अहिले लाखौ ं ने पाली युवाहरुले रो जगारीको खो जीमा भारतका गल्लीहरुमा दुःख पाइरहे का छन् । खाडी मुलुकमा श्रम र पसिना बगाउँदै कहर काटिरहे का छन् । कति त जीवनसँग संघर्ष गर्दा मृत्युवरण गर्न विवश छन् । यस् तो बे लामा मुलुकको विकास र समृद्धिको यो जना बनाउने सांसदहरुलाई खरीद्न खो ज्ने हरु मुलुकको विकास र समृद्धिका बाधक हुन् । विगतमा सांसदहरुलाई गाडीमा भन्सार छुट दिंदा के ही सांसदहरुले पजे रो बे चे र लाखौ ं रकम कमाएका थिए । अब विगतको नकारात्मक पाटो दो हो ¥याउने है न । दे श र जनतालाई के न्द्रमा राखे र जनताको मन जित्ने गरी काम गनेर् हो  । यो बे ला सबै किसिमका प्रलो भनबाट मुक्त भएर नवनिर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो जिम्मे वारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँदा सिक्किमका सांसदहरुलाई एक–एकवटा सुनको चरा उपहार दिइएको थियो  । सांसदहरु कसरी खरीद बिक्री हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण मात्र हो यो  । ने पालकै सन्दर्भमा त्यति ठूलो खरीद बिक्रीको सम्भावना हाललाई छै न । तर यसखालका नकारात्मक घटनाबाट शिक्षा लिन भने जरुरी छ । सुनको चरा, पजे रो र घडे री जे लिइए पनि ती अनै तिक कर्म हुन् । कर्म फरक जस् तो दे खिए पनि सारतत्व एउटै हो  । यसबाट अलग हुने हो भने सबै भन्दा पहिले भ्रष्ट मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ । हाम्रा सांसदहरुले कस् तो आचरण र व्यवहार दे खाउँछन्, त्यसका लागि के ही समय प्रतीक्षा गनैर् पर्छ । हामी यत्ति मात्र भन्न सक्छौ ं– कम्तिमा विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ र त्यसलाई दो हो ¥याउनुहुँदै न ।
यतिबे ला जनताका इच्छा आकांक्षाहरु चुलिएका छन् । सबै ले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएर चुनाव जिते का हुन् । त्यसलाई साकार पानेर् हो भने इमानदारिता, दृढ अठो ट र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अहिले पनि दूरदराजका ग्रामीण वस् तीमा बस् ने जनताले बिरामी हुँदा सामान्य उपचार पाइरहे का छै नन् । स् वास् थ्य चौ कीहरुमा सिटामो ल पाइ“दै न । शुद्ध खाने पानीको अभावमा झाडापखालाबाट वषेर् नि दर्जनौ ं नागरिकले जीवन गुमाइरहे को अवस् था छ । यस् तो अवस् थामा आर्थिक विकास र समृद्धि आकाशबाट बर्सिदै न । तीनै तहका सरकार र ने तृत्व वर्गले विगतकै परम्परा दो हो ¥याउने हो भने अझ ठूलो दुरावस् था भो ग्नुपनेर् छ । सांसदहरुले राज्यको षबाट पाउने सुविधा पाउने नै छन् । अहिले सांसदलाई घडे री है न, जनतालाई सिटामो ल चाहिएको छ ।
Previous: क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलन दाङमा
Next: चीनको आर्कटिक क्षेत्र विकास गनेर् योजना